Ngwọta - Zhuhai Mitaly Innovations Technology Co., Ltd.
Keyplus ngwọta na-n'ọtụtụ ebe na dị iche iche nke ụlọ ọrụ ụlọ gburugburu ụwa, gụnyere ụdị nile nke mkpọsa na-echekwa, anoghi n'ulo oba na mkpuchi ụlọ ọrụ, yana n'ichepụta na ulo oru na saịtị, inye nche, ohere akara usoro ， onye ọrụ na njikwa ọrụ.
Isi uru ：
Use Iji ihe mmegharị eme ihe n'ụzọ dị irè n'akụkụ dị iche iche nke ụlọ ọrụ ahụ na n'ofe ndị ọrụ dị iche iche. ịgbatị nche na ozi nsuso iji nweta isi ihe na ụlọ niile: site n'ọnụ ụzọ ụlọ ọrụ gaa na kabet data ruo n'ọnụ ụzọ ụgbọala.
● Site na igbanwe usoro njikwa nnweta na ịgbanye iji ụzọ dị iche iche mee ka usoro onye ọ bụla maka nzukọ na mmemme pụrụ iche dị mfe.
Agencylọ Ọrụ Gọọmentị
A na-eji usoro a n'ọtụtụ ebe na ụlọ ọrụ ọha na eze dị iche iche, gụnyere obodo na obodo ukwu,steti na gọọmentị etiti, ụlọ ụlọ ikpe, ngalaba mịnịstrị nantọala ndị agha wdg, na-enye nchebe nchebe, njikwa nnweta na njikwa onye.
● Ọ nwere ike ikewapụ ọha na eze na mpaghara pere mpe na njikwa nnweta site na ịkekọrịta ikike nnweta na oge nnweta na mpaghara dị iche iche.
● Usoro ahụ na-agbanwe atụmatụ njikwa nnweta mfe ma bulie ojiji nke mpaghara ọha site na mgbanwe ya.
● Ọ na-eji ọrụ mkpọchi iji chịkwaa ihe mberede.
● Onu ogugu nwere oke onodu iji kpokuo ihe ndi mmadu choro iji kwado ndi ochichi ma mee ka ikike ndi mmadu na-agbanwe agbanwe.
KEYPLUS jikọtara nkà na ụzụ ndị nwere ọgụgụ isi na ikike dị iche iche nke ndị mmadụ na mpaghara dị iche iche iji nye ụmụ akwụkwọ na ndị ọrụ ụlọ akwụkwọ nchekwa na ịdị mma maka mmụta, ọrụ na gburugburu obibi.KEYPLUS mkpọchi nwetara ikike nchịkwa nke ọchịchị, njikwa zuru oke, na iwusi njikwa nke ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ike.
● Ọ dị mfe ịkọwa onye, ​​mgbe, na ebe ịgafe.
● Ọ bụghị naanị kewaa site na ọnọdụ, kamakwa kewaa ohere ịchịkwa mgbochi site na oge oge, ka iji jikwaa ndị ọbịa na-adịru nwa oge, dị ka ndị bịara, ndị ọrụ oge wdg wdg. Mfe ijikwa ndị nkuzi na ụmụ akwụkwọ.
Ration Integration nke ohere akara usoro na campus ọrụ.
System Sistem na-agbanwe agbanwe na-eme ka ị gbanwee usoro njikwa nnabata dabara adaba.
● Ọ bụrụ na mberede, ọrụ mkpọchi mpaghara na-enyere onye ọrụ ikike ka ọ gbanwee ọnọdụ mkpọchi KEYPLUS na ọnọdụ mkpọchi onwe ya.
Igodo mmeghe nke Keyplus'door maka ụlọ ọrụ ahụike gụnyere mkpọchi na usoro mkpọchi ụzọ iji meghachi nsogbu nchekwa na nsogbu ndị metụtara ọrụ ahụike.
Ihe mmeghe ọnụ ụzọ na-agụnye ịchịkwa ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị mmadụ site n'ọnụ ụzọ mbata, yana ọnụ ụzọ ime ụlọ ọrụ. Ọ bụrụ na ejiri ya n'ụlọ ọgwụ, nlekọta ahụike, ma ọ bụ ụlọ ahịa ọgwụ, Keyplus smart door mkpọchi ụzọ ga-eweta ịdị mma, nchekwa na nchekwa na ebe ndị a.
● Nye ndị ọrụ, ndị ọrịa, ndị ọbịa na ndị ọrụ mpụga ebe nchekwa na adaba. Ghọta ngwa ngwa onye nwere ikike ịnweta mgbe na mgbe.
● Nche nke atụmatụ njikwa njikwa enwere ike ịba ụba ma nwee ike ikpuchi ndị ọrụ ọfịs mkpanaka na-enweghị emetụta arụmọrụ.
Chebe nchekwa nke ọgwụ, ọgwụ ma ọ bụ ihe nke aka gị pụọ n'ohi.
Centers centerslọ ọrụ obodo dị iche iche, ụlọ ọgwụ na ọfịs ndị ọrụ na netwọkụ nwere ike iji asambodo ụlọ ọgwụ dị mkpa iji banye ma pụọ.
Products Iji ngwaahịa na teknụzụ a pụrụ ịdabere na ya na-enweghị nghọta. A na-eji ya eme ihe na mpaghara nwere nnukwu ije ụkwụ (gụnyere ebe a na-adọba ụgbọala, ihe mberede na ọnụ ụzọ ọha na eze).
Nkwari akụ: Shanghai Golden Island
Lọ akwụkwọ: Shanghai Arts college
Lọ ọgwụ: Qingdao Municipal Hospital
Ebe obibi: Beijinglọ International nke Beijing Hairun
Gọọmentị: Ping ding shan nke Henan Province